Guppy (ရှည်လျားက Short) - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Guppy (ရှည်လျားက Short)
Guppy (ရှည်လျားက Short)
မေ 31, 2018
ကျော်ကြားကုန်သွယ်စာရေးဆရာ Daryl Guppy ၏လုပျငနျးအပျေါအခွခေံတစ်ခုညွှန်ပြချက်.
ဒါဟာနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်6၏ EMAs 3, 5, 8, 10, 12 နှင့် 15 သင်ဦးတည်ချက်နှင့်ရေတိုရေရှည်လမ်းကြောင်းသစ်၏ခွန်အားပေးသောကာလ, အဆိုပါထင်ကြေးလမ်းကြောင်းသစ်. ဒါဟာဦးတည်ချက်များနှင့်ရေရှည်လမ်းကြောင်းသစ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့-ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလမ်းကြောင်းသစ်၏ခွန်အားကိုတိုင်းတာပေးသောခြောက်လ EMAs ၏အခြားအုပ်စုတစ်စုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်. EMAs ၏ဤအုပ်စုများမှာ 30, 35, 40, 45, 50, 60 Daryl Guppy တူသောကာလနေ့စဉ်အချိန်ဇယားအဘို့အလို့ပြော. ဒီအညွှန်ပြချက်နေ့စဉ်အချိန်ဇယားဇယားအပေါ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ကုန်သွယ်မှုမှဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည်ဒါပေမဲ့တခြားအချိန်ပြကွက်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, M15 သို့မဟုတ် H1 နဲ့တူ, တူညီသောကာလနှင့် Setup နှင့်အတူ.
သငျသညျပျမ်းမျှ Moving အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်အောင်ငါသည်ဤညွှန်းကိန်းလုပ်, ကာလနှင့်အသုံးချစျေးနှုန်း, i.e: မြင့်သော, အနိမ့်, ဖွင့်လှစ်, ပိတ်, ရွေ့လျားပျမ်းမျှတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုသည့်အရက်ဆိုင်၏ပုံမှန်နှင့်အလေးချိန်စျေးနှုန်း. သင်ကပိုသက်သာခံစားရသို့မဟုတ်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်၏နည်းနည်းအပြောင်းအလဲများကိုဖို့ညွှန်ပြချက်ကပိုအထိခိုက်မခံစေသောအခြားအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းကုန်သွယ်မှုသင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာပြောင်းလဲနိုင်သည်.
EMAs နှစ်ယောက်စလုံးအုပ်စုတစ်စုကုန်သည်များဤနှစ်မျိုး၏သဘောတူညီချက်သို့မဟုတ်သဘောမတူတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ထင်ကြေး. ဒီအသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်သို့မဟုတ်ပေါ်မှာအံ့ဆဲဆဲပြောင်းလဲမှုများမျက်နှာသာအတွက်ပိုကောင်း entries တွေကိုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားကဒီရန်ပွဲများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုပေးသည်.
ငါ EMAs ၏အုပ်စုနှစ်စုအတူတကွအပြိုင်နှင့်နီးစပ်သည့်အခါသည်ဟုဆိုရပါမည်, အချင်းချင်းနှင့်အုပ်စုများအကြားနှစ်ဦးစလုံး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်စျေးကစားသဘောတူညီချက်အတွက်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြပြီးကြီးမားတဲ့အပြောင်းအရွေ့ကိုအလွန်နီးကပ်. ငါ၌မဘတ်ဘူးသညျအတိုငျး “Market က Wizards”, ဒါဟာအလွန်လူစည်ကားက Wall Street အတွက်အတိတ်ကာလအတွက်အခန်းတစ်ခန်းမလှုပ်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်နေဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိသောအခါကဲ့သို့ဖြစ်၏, နှင့်အနည်းငယ်အချိန်ပြီးနောက်, သူတို့ကိုအပေါ်တစ်ဦးရိုင်းပြောင်းရွှေ့လူတွေပျော်ရွှင်ဖွယ်လှည့်လုပ်.
ဤဒုတိယဗားရှင်းမှာတော့, file45 ငါ့ကိုအကြံပြုတူသောငါရွေ့လျားပျမ်းမျှပြောင်းလဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကဆက်ပြောသည်ပါပြီ.
Guppy (ရှည်လျားက Short) တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Guppy (ရှည်လျားက Short) သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Guppy install လုပ်နည်း (ရှည်လျားက Short).mq4?
Guppy Download (ရှည်လျားက Short).mq4
Guppy မိတ္တူ (ရှည်လျားက Short).သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Guppy ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး (ရှည်လျားက Short).mq4
indicator Guppy (ရှည်လျားက Short).mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
Guppy ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို (ရှည်လျားက Short).သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ mq44ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးRogue ကို tick detector